Tag: blọgụ ndị ọbịa | Martech Zone
Tag: blọgụ ndị ọbịa
Ihe ochicho njini ka bu otu ahia ahia, o nwere ike buru ihe mgbagwoju anya ma mekwaa ya ka ogba ugbo ala di na New York City. E nwere ọtụtụ mmadụ na-ekwu okwu ma na-ede banyere SEO na ọtụtụ na-emegide onwe ha. M gakwuuru ndị nkwado kachasị na obodo Moz ma jụọ ha otu ajụjụ atọ: Kedu ụzọ SEO nke onye ọ bụla hụrụ n'anya abaghị uru n'ezie? Kedu usoro aghụghọ SEO chere na ọ bara uru n'ezie?
Monday, August 26, 2013 Monday, August 26, 2013 Ọ bụ Larry Alton
N'otu oge, backlinks chịrị ụwa nke njikarịcha njin ọchụchọ. Mgbe ejiri ogo PageRank tụọ ogo saịtị, backlinks nyere ọtụtụ votu a na-achọkarị nke mere ka metrik a. Mana dị ka algorithm nke Google tozuru etozu, ogo weebụsaịtị nwere ike ọ gaghị ezu ike ọzọ na ọnụọgụ nke njikọ ndị na-egosi ya. Ogo saịtị ntanetị nke njikọ ahụ malitere iburu ibu karịa ọnụ ọgụgụ buru ibu nke njikọ saịtị